March 19, 2020 - Tameelay
ပြုံးနေတိုင်း ပျော်နေတယ်လို့မထင်ပါနဲ့ ကျွန်မ မပျော်ပေမယ့် ရအောင် ပြုံးတတ်တဲ့ အကျင့်လေးရှိတယ်
March 19, 2020 Tameelay 0
ပြုံးနေတိုင်း ပျော်နေတယ်လို့မထင်ပါနဲ့ ကျွန်မ မပျော်ပေမယ့် ရအောင် ပြုံးတတ်တဲ့ အကျင့်လေးရှိတယ် နာကျင်ကျင်နဲ့လဲ လှလှပပလေး ပြုံးပြတတ်ဖို့အထိ ကျွန်မ လေ့ကျင့်ထားပါတယ် ။ ပျော်ရာမှာ မနေရ တော်ရာမှာ နေနေရတဲ့ ဘဝမှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပြုံးရ ပျော်ရတဲ့အချိန်တွေထက် ပျော်အောင် မနည်းနေနေရတဲ့အချိန်တွေကသာ ပိုများခဲ့တာလေ ။ […]
လျစ်လျူရှုခြင်းဆိုတာ အတတ်ပညာတစ်ခုပါပဲ ကျောင်းစာတွေ စာအုပ်တွေ အထဲကလို သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွေ မပါပေမယ့် တတ်မြောက်ချင်တဲ့ လူတိုင်းမှာ . . . နာတတ်တဲ့ စိတ်နဲ့ နောင်ကျဉ်လောက်တဲ့ ဒဏ်ရာ ဒဏ်ချက်တွေ လိုပါတယ် ။ အမှတ်မရှိရင် ဘယ်လောက် ဒဏ်ရာများများ မူလအတိုင်းပဲ ဖြစ်လာမှာလေ ။ […]
နှစ်ဖက်တီးမှ မြည်တဲ့လက်ခုပ်တွေမှာ . . . သူ့ဘက်ကချည်းနာကျင်ရသလို ပုံစံမျိုးတွေနဲ့ ကိုယ့်ကို ဗီလိန်ဇာတ်တွေ သွင်းပစ်လိုက်တယ် ။
နှစ်ဖက်တီးမှ မြည်တဲ့လက်ခုပ်တွေမှာ . . . သူ့ဘက်ကချည်းနာကျင်ရသလို ပုံစံမျိုးတွေနဲ့ ကိုယ့်ကို ဗီလိန်ဇာတ်တွေ သွင်းပစ်လိုက်တယ် ။ လက်ခုပ်နှစ်ဖက်ဆိုတာ . . . ပါးရိုက်သလိုမျိုး ပါးတစ်ဖက်တည်း နာရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးလေ ကိုယ့်ဖက်လဲ အထိုက်အလျောက်တော့ နာကျင်ရတတ်ပါတယ် ။ လူတချို့က အရမ်းကို ဟန်ဆောင်ကောင်းကြတယ်ဆိုတာထက် […]
စကားမပြောတတ်ရင် ဆဲသလိုပဲတဲ့ ။ ရိုးသားပါ ပွင့်လင်းပါ ဒါပေမယ့် အချိန်အခါလေး သိရတယ် ။ ငါမှန်တာပဲဆိုပြီး တစ်ဖက်သားကို ထိခိုက်စေမယ့် စကားလုံးတွေကို အာဘောင်အာရင်းသန်သန် ပြောနေတာကျ ရိုးသားပွင့်လင်းတာ မဟုတ်တော့ဘူး သိက္ခာချတာ ဖြစ်သွားပြီ ။ ဘယ်သူအတွက်မှ အကျိုးမရှိရင် အဲ့ဒီ အမှန်တရားကြီးကို မြိုချပစ်လိုက်ပါ […]
အိမ်ထောင်ရေး . . . တစ်ခုမှာ အဖြစ်အများဆုံး ပြဿနာက ဖောက်ပြန်ခြင်းတွေပဲ ။ ယောက်ျားပဲဖြစ်ဖြစ် မိန်းမပဲဖြစ်ဖြစ် ဖောက်ပြန်ရခြင်း အကြောင်းအရင်းတွေဟာ ဖိုမ သဘာဝနဲ့မဆိုင်ဘူး အဓိက က ဗီဇနဲ့ပဲ ဆိုင်တာပါ ။ နှစ်ဦးသဘောတူ လက်ထပ်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် . . […]
လိမ်နေမှန်းသိသိရဲ့နဲ့ နားထောင်ပေးတတ်တဲ့ နားတစ်စုံ ကျွန်မမှာ ရှိတယ် ။ ဒါပေမယ့် တခြားသူတွေလို အရသာခံပြီး နားထောင်ပေးတတ်မျိုးတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့ ။ အပင်ပန်းခံပြီး ကိုယ့်ကို မသိစေချင်လို့ လိမ့်နေတဲ့အရာကြီးကို ကိုယ်က သိပြီးသားကြီးလို့ ပိတ်ပြီးပြောလိုက်ရင် တစ်ဖက်က ရှက်သွားမှာ စိုးတဲ့စိတ်နဲ့ မပြောဖြစ်ခဲ့တာပါ ။ မသိဖာသာ […]